Solos Isikali Isixazululo Factory | I-China Solid Dosage Solution Manufacturers kanye nabahlinzeki
Z uchungechunge Capsule Ukugcwalisa Machine
Umshini wokugcwalisa i-capsule we-Z uchungechunge wenzelwe ngokukhethekile ukugcwaliswa kwezidakamizwa zamaphilisi anzima, futhi izinhlobo ezahlukahlukene zemishini ziyatholakala. Isetshenziselwa kabanzi ukugcwalisa izinhlobo ezahlukahlukene zemithi ngenxa yezinhloso zayo eziningi, umsebenzi ophelele, ukusebenza okuthembekile nokugcwaliswa okunembile. Inomklamo oyingqayizivele futhi ingaqedela ukugcwaliswa okuxubekile kwemithi ehlukene kupilisi efanayo.
S Series Ithebhulethi cindezela umshini
S cindezela ithebhulethi umshini wokucindezela uklanyelwe ukunikeza izixazululo ezisebenzayo zokucindezela ithebhulethi ngokuya ngezidingo zabasebenzisi. Ukuzinza nokuthembeka kwayo kuyaziwa embonini, futhi ukusebenza kwayo okulula, ukulawula okuguqukayo nokuzenzekelayo kudunyiswa kakhulu. Ngasikhathi sinye, ingahlinzeka ngamathebulethi anezendlalelo ezimbili nezixazululo zamathebulethi we-effervescent, enikeza abasebenzisi ngezinketho ezahlukahlukene zokucindezela ithebhulethi.
Isisetshenziswa Sokumboza se-G Series
Umshini wokuchungechunge we-G ungacubungula noma yikuphi ukwakheka nosayizi wemikhiqizo, futhi uyithuluzi elifanele lokufakwa kwefilimu kwamathebulethi, ukumboza ifilimu kwamaphilisi amancane, ukumboza ushukela, ukumbozwa kwamapeleti nokubeka. Uhlelo lobunikazi obunamalungelo obunikazi lungathuthukisa kakhulu ukusebenza kahle kokomisa nekhwalithi yomkhiqizo.
P Series Perforated esinemthombo Equipment
P uchungechunge olunezimbobo zokugcoba umshini ngumkhiqizo osezingeni lomhlaba osebenzisa ubuchwepheshe bamuva bokunamathela. Ihlanganisa izinzuzo zayo yonke imishini yokumboza emakethe yamanje yamazwe omhlaba futhi ihlangabezana nezidingo zakamuva zomkhakha wezemithi wokuhlukaniswa komshini nokuhlanzwa, okungafinyelela ukukhiqizwa okuphelele okuphelele, kunciphise ukuvezwa kwezithako ezisebenzayo futhi kwandise ukuvikeleka kokuphepha ko-opharetha.
I-DG Series Granulator
I-granulator eyomile uhlobo lwemishini yokuvikela imvelo enotshalomali oluphansi, ukusebenza kahle okuphezulu, ukonga ugesi futhi akukho ukungcola. Inqubo yokuhlanganisa, ukwakha, ukuchoboza kanye ne-granulator yezinhlayiya ezomile nge-mechanical extrusion yenziwa ngokusebenzisa amanzi amakristalu ento uqobo lwayo.
I-HLSG Series I-Granualator Emanzi
I-LGL Series Fluid Bed Dryer
okomile okombhede oketshezi kungashintshwa ngokushesha futhi ngokwehlukana, okungahlangabezana kangcono nezidingo ze-GMP. Uketshezi lombhede oketshezi kuze kufike ku-12 bar, i-ATEX ehambisanayo, inganikezwa ngokuya ngezidingo zomsebenzisi.